खतरनाक रंग « News of Nepal
रंग र इनामेलमा जनस्वास्थ्यलाई दीर्घकालसम्म प्रतिकूल असर पुर्याउने ‘लेड को मात्रा उच्च हुने भएकाले त्यस्ता सामग्रीको प्रयोग होलीको बेला नगर्नु बुद्धिमानी हुने चिकित्सकहरूको सुझाव।
बच्चाका खेलौना र महिलाका शृंगार सामग्री, सिन्दुर, होली र तिहारमा प्रयोग गरिने विविध किसिमका रंग, इनामेललगायतमा लेडको मात्रा उच्च हुने जानकारहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गतवर्ष काठमाडौं उपत्यकाका बालबालिका बारे गरेको अध्ययनले उपत्यकाका बालबालिकामा लेडको प्रभाव उच्च रहेको देखाएको छ। काठमाडौंको टिचिङ अस्पताल, ललितपुरको पाटन र भक्तपुरको सिद्धि मेम्मोरियल अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका ३ सय १२ बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा यस्तो नतिजा देखिएको परिषद्ले जनाएको छ। ‘उपत्यकाका करिब ९० प्रतिशत बालबालिकामा लेडको मात्रा औसतभन्दा माथि छ –परिषद्का सदस्य–सचिव डा. कार्कीले भन्नुभयो।
परिषद्ले करिब १ वर्षको अवधिमा ६ महिनादेखि ३६ महिना उमेरसम्मका बच्चाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो। बालबालिकाको शरीरमा ५ माइक्रोग्राम प्रतिडेसिलिटर लेडको मात्रालाई सामान्य तहको मानिन्छ भने वयश्कहरूमा १० माइक्रोग्राम प्रतिडेसिलिटरलाई औसत मान्ने गरिएको छ। रंग र इनामेलको कणसमेत मिसिएको धुलाम्य क्षेत्रमा खेल्ने बालबालिका औद्योगिक क्षेत्र आसपासका बस्तीका बालबालिकामा लेडको मात्रा उच्च हुनसक्ने यस विषयका जानकार डा. केयुर गौतम बताउनुहुन्छ।
गौतम नेतृत्वको टोलीले केही महिनाअघि वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्र आसपासका बालबालिका बारे गरेको अध्ययनमा लेडको प्रभाव भेटिएको थियो। विकसित मुलुकहरूले लेडको प्रयोगमा मापदण्ड कडाई गरेपछि ‘डिस्पोज गर्नुपर्ने उत्पादन लुकाई–छिपाई सस्तो मूल्यमा विकासोन्मुख मुलुकमा भित्रिने गरेकाले नेपाल जस्ता पीछडिएका देशमा समस्या हुने गरेको गौतमको तर्क छ।